Yepamusoro 7 Yakanakira yeSemax Iwe Unofanirwa Kuziva Usati Washandiswa - Phcoker
NSI-189 Pasi ≥98%
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) brain brain ≥98%
Yepamusoro 7 Inobatsira yeSemax Iwe Unofanirwa Kuziva Usati Washandiswa
1. Chii chinonzi Semax Peptide?
2. Semax Chikumbiro
3. Semax Kubatsirwa
4. Semax Inoshanda Sei?
5. Ndinofanira kushandisa sei Semax?
6. Kune chero madhara pamunoshandisa Semax here?
7. Iwe unofanirwa kushandisa Semax stack kana uchishandisa?
8. Ndeapi mutsauko pakati peSemax vs Selank?
9. Ndingawanepi Semax pamhepo?
Semax yakagadziridzwa mu1980s uye 90s, yakazobvumidzwa muRussia kurapwa kwevanorwara nesitiroko, kukuvara kwehuropi uye kuora mwoyo kwekuziva. The Semax peptide yakaiswa pasi pezvidzidzo zvakasiyana zvevanhu muRussia, uye yakaratidza kuve neanonzwisisa ekuvandudza zvivakwa.
Kune rimwe divi, kune zvakare zvakakwana zvinyorwa zvekurapa zvakawanikwa pane kuti mushonga wacho unogona kubatsira sei mukuderedza kushushikana pamwe nekuvandudza mamiriro emushandisi. Semax inoshandiswa seyakajairika nootropic, asi zvakare ine zvimwe zvinoshandiswa sekuvandudza hutano hwehuropi uye mukuwedzera simba rekudzivirira muviri pakati pemamwe mabasa. Kubatsira kweSemax kunogona kungonzwika chete kana mushonga wacho ukatorwa nemazvo. Nekudaro, ita shuwa kuti iwe unowana yekushandisa nhungamiro kubva kuna chiremba wako kuti uwane mibairo uye ruzivo.
Semax (80714-61-0) mushonga we peptide uyo wakagadziriswa muRussia muma1980 kuti ubatsire mukurapa uye kudzora kwezvirwere zvakaita sekurova. Nhasi, kunetseka kweSemax kwakanyorwa mune yeRussia runyorwa rwemishonga yakakosha mushure mekuratidza kushanda kwayo mukurapa mamiriro akasiyana ehutano.
Vanachiremba vanonyorawo Semax senge nootropic mushonga mushure mekuziva kuti inogona zvakare kutora basa rakakosha mukuvandudza mashandiro endangariro uye kuderedza kushushikana. Kunyangwe hazvo Russia neUkraine dzakabvumidza kushandiswa kweichi chinwiwa, dzimwe nyika dzakaita seUnited States of America dzichiri kuzvigamuchira kunyangwe zvichiratidza kuve zvakakosha pakurapwa kwemamiriro akasiyana ehutano. Nekudaro, izvo hazvikutadzise kushandisa Semax poda.
Kunze kweiyo Semax poda yakasarudzika, kunewo mamwe maviri musiyano uripo pamusika, asi iwo anenge achangoshanda nenzira imwe chete. Ivo vanosanganisira Na-Semax-Amidate uye N-Acetyl. Parizvino, hapana kudzidza kwakawanda kwakaitwa kana kudhindwa pamusoro peshanduro mbiri dzeSemax. Nekudaro, kubva kuongororo yeSemax, vamwe vashandisi vanotaura kuti Na-Semax-Amidate ine simba rekuvandudza kutarisa apo N-Acetyl Semax iri kuwedzera simba. Mhedzisiro yeSemax inogona kusiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, zvichienderana nemabatiro anoita muviri kune dosi. Iwe zvakare wakasununguka kuyedza chero ipi zvayo yeSemax shanduro asi ita shuwa kuti unobatanidza chiremba wako mune iyo yose dosage process.
The Semax poda inowanikwa pane akasiyana online epamhepo uye epanyama zvitoro zvakakukomberedza iwe kwaunogona kuita yako kuraira chero nguva. Tora Semax yekutengesa kubva kune yakavimbika uye ine ruzivo mutengesi kana mutengesi. Haasi iye wese mutengesi wezvinodhaka anopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye inogara iri pfungwa yakanaka yekudzidza iyo Semax vatengesi usati waita yako odhi. Nzwisisa kuti chitoro chinoshanda sei uye kuti chinotora nguva yakareba sei usati watora yako Semax (80714-61-0).
Zvinokurudzirawo kuenda kunovhenekwa kurapwa usati watanga kutora mushonga uyu. Semax yekutengesa iri mishonga inorayirwa, uye nekudaro, chiremba wako anofanirwa kunge ari munhu akakodzera kukugadza chakakodzera dosage iwe mushure mekutarisisa mamiriro ako. Maitiro ekurapa anodawo kutariswa nachiremba wehutano kuti awane zvirinani.
Paunenge uchitenga Semax (80714-61-0), uzvichengete kure nevana kusvika uye mufriji nekuti zvinogona kusvibisa senge mamwe mapeptide. Kuti ive nani, Semax chiitiko, simbisa iwe unoteedzera kune ese mirayiridzo mirayiridzo. Usambofa wakagadzirisa dhivhaji yacho pasina kuudza chiremba wako.
Sezvambotaurwa, Semax Peptide rave rakakosha munyika yekurapa, kunyanya pakurapwa kwemamiriro akasiyana. MuRussia, mushonga uyu wakabvumidzwa mushure mekuziva kuti unogona kubatsira mukutenderera kutenderera kwekuita sekurohwa. Nekudaro, zvidzidzo zveSemax zvakaitwa mumakore apfuura zvakaburitsawo zvimwe zvirwere izvo mushonga unogona kurapa zvinobudirira.
Nyika dzakasiyana kana vanachiremba vanoshandisa Semax kurapa akasiyana siyana hutano. Semax kuzvidya moyo kunoiswa mukati, asi madonhwe chete anosiyana zvichienderana nemamiriro ehutano ari pasi pekurapwa. Iko kune zvakare jekiseni Semax fomu iyo inofanira kungoendeswa chete nehutano hwehutano. Nguva dzose yeuka kuchengetedza mushonga mufiriji.
Semax ndeye nootropic yakaratidza kuve inobatsira zvikuru mukubatsira uropi hwako munzira dzakasiyana. Sezvo Semax yakabvumidzwa kushandiswa kwemishonga mu2011, mushonga wave uchishandiswa kurapa mamiriro akasiyana ehutano. Kana ikatorwa nemazvo, mushonga unogona kuburitsa zvinotevera zvakanaka;
1. Inotendera Zviratidzo zveADHD
Semax ine mhedzisiro inobatsira mukurapa kweADHD zviratidzo. Zvidzidzo zvekurapa zvinoratidza kuti Semax inovandudza ndangariro uye inowedzera neurotransmitters, inowanzo kuve yakaderera kune vanhu vane ADHD. Parizvino, Semax ndeimwe nzira yekurapa kwevana vane ADHD muRussia. ADHD ndeye neurodevelopmental mamiriro ayo anogona kukanganisa dopamine mazinga, uye Semax kwakaratidza kuti kunobatsira kugadzirisa dambudziko iri.
2. Inodzivirira Oxidative Kukuvara
Pakutanga, Semax yakagadzirirwa kubatsira kurohwa kwemoyo uye kurohwa ne stroke. Kwemakore, mushonga uyu wanga uchishanda mukudzora nekudzivirira oxidative kuora. Oxidative kukuvara kunoitika nekuda kwe oxidative kusagadzikana, iko kusanzwisisika kwemahara radicals uye antioxidants mumuviri wako. Iyo nyoro oxidative kusagadzikana inokonzerwa nekurovedza muviri inobatsira zvakare kudzora maturu kukura sezvo inokonzeresa kugadzirwa kweantioxidant.
Nekudaro, kwenguva refu oxidation kusagadzikana inokonzerwa nezvirwere kana mamiriro akadai sekurwara kunoguma nekukuvara kwemapuroteni, masero emuviri, uye DNA. Maererano ne Zvidzidzo zveSemax, kusanganiswa kweiyo mushonga mukurapa kwekurwiswa kwave nekukanganisa kwakanyanya kudzosera chiyero chemabasa akadzika emitsipa. Mhedzisiro iyi inobatsira vakawirwa nenjodzi kuti vadzivise njodzi dzemumotokari, gomarara uye rakatarisana.
3. Inobatsira kuderedza kushushikana
Kushushikana kunogona kuita semhedzisiro yemamiriro akawanda akadai sechirwere, kushaya hope, kana kukuvara mumuviri. Miviri yemunhu yakasiyana, uye nekudaro, inoitawo nekushushikana zvakasiyana. Semuenzaniso, vamwe vanhu muviri unopindura kunetseka nekuwedzera kuwedzera kwechiropa enzymes kugadzirwa. Zvidzidzo zvakaratidza izvo Semax yekuora mwoyo yakaderedza kugadzirwa kweiyo chiropa painopihwa kumhuka panguva yekutsvaga kwechiremba. Kune rumwe rutivi, vashandi vehutano vakataura kuti Semax yakajairika shanduko yemuviri inokonzerwa nekushushikana kunokonzerwa nekukuvara kwemuviri.
4. Inowedzera kuwedzera kweropa
Chinhu chine njodzi chakanyanya chekutadza kurohwa nehana kushomeka kana kushomeka kweropa kuyerera kuuropi, mamiriro anozivikanwa sekerekebrovascular kushomeka. Iko kushandiswa kweSemax mukurapa kwekurwara kwakanyatsoburitsa mhinduro dzakanaka nekuvandudza kutenderera kweropa kuenda kuhuropi. Mushonga uyu zvakare une chekuita nekudzivirira mwoyo wako kubva paunenge uine neropa rakakwira. Nekudaro, izvi zvinodzivirira kubva pakukuvadza chero kwemwoyo kutadza, kunyangwe kana uri mukupiswa nekupisa.
5.Increases the Brain-Yakapiwa Neurotropic Factor (BDNF)
BDNF inoita basa rakakosha mukupukunyuka kwema neurons, kukura kwekuziva, uye mune plastikiity yeiyo synapses. Iyo BDNF yakaderera mazinga inogona kutungamira kana kuwedzera zvakanyanya kushungurudzika uye kusagadzikana. Izvo zvakanyanya sezvainokuisa iwe kune mashoma emigumisiro, Semax yakaratidzawo kuve yakanakisa BDFN enhancer uye antidepressant. Mushonga unogona kuvandudza BDNF kugadzirwa kutenga kusvika ku800%.
Kuburikidza nekuwedzera BDNF kugadzirwa, Semax inobatsira mukudzora nekurerutsa kusagadzikana uye kushushikana. Antidepressant zvidzidzo zvekurapa zvakaratidza kuti yakakwira sei BDNF mazinga ane maitiro akanaka mukuderedza kushungurudzika. Semax inomutsa limbic system receptors kugadzira adenosine, dopamine, serotonin, uye histamine, iyo inobatsira mune yakapusa
ng zviratidzo zvinosangana neADH, kusagadzikana, uye kushungurudzika. Kuwedzera kweaya ese neurotransmitters anowedzera kukurudzira, nekudaro achivandudza kutarisa uye kubereka.
6. Semax inogona kubatsira mukuderedza marwadzo
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchirwadziwa, uropi hwako hunowanzoburitsa mitsipa inozivikanwa sehumephalins, inodzikamisa kunzwa kwekurwadziwa. Izvo zvakare zvinoshandura maonero ekurwadziwa nekudzora kutya kwekutya kunoitika kana iwe uri kurwadziwa.
Enkephalins inogona chete kugadzirisa marwadzo emuviri kwenguva yakati; saka, Semax inobatsira nekudzivirira kuputsa kwayo pamwe nekuwedzera kugadzirwa kwayo. Nekudaro, kubatsira kuderedza kurwadziwa kwemukati mumuviri wako kwenguva yakareba uye izvo zvinoita kuti Semax ive iyo inorwadza inoderedza marwadzo.
7. Semax Inovandudza Memory Kuchengeta
Neurotransmitters senge enkephalins zvine chekuita nekuona, uye kana zvawedzera, vanoita basa rakakosha mukugadzira ndangariro uye kudzora manzwiro. Kutsvaga kwekurapa kwakaitwa muRussia, pane vashandi vane hutano hwakanaka, Semax poda yakavandudza kutarisisa kwavo uye nekurangarira kwavo. Zvidzidzo zveSainzi zvinoratidza kuti kukwidziridzwa kwekufamba kweropa kwakakodzera uye kudzivirirwa oxidative muuropi hwemunhu kunowedzera ndangariro.
Kuwedzera kweBDNF mazinga mu hippocampus anonzi zvakare akakosha mukuvandudza ndangariro nekuti hippocampus ndiyo nzvimbo yepfungwa muuropi hwepfungwa uye ndangariro. Kune rimwe divi, BDNF inobatsirawo mukuvandudza kurangarira, ndangariro, uye kugona kudzidza nekuchengeta ruzivo rutsva. BDNF inomutsa kugadzirwa kweNeurogeneis, chinova chizvarwa chetsinga nzira muuropi dzinobatsira mukuvandudza kushanda kwehuropi uye kugadzirisa.
Semax ndeye potot nootropic uye mushonga kana uchishandiswa kubata dzakasiyana siyana dzehutano. Kana ichinge yapinda mumuviri wako system, Semax inowedzera huwandu hwehuropi-yakatorwa neurotropic zvinhu (BDNF) mazinga uye nekushandawo.
Sainzi, BDNF mapuroteni anosimudzira hutano hwepfungwa nekuchengetedza nekusimbisa maseru ehuropi, kukurudzira kukura kwemaseru ehuropi, nekusimudzira kukanganisika kweuropi Kazhinji, chero nootropic inowedzera BDNF mazinga inovandudza kubata kwevazhinji vashandisi, uye Semax yakaratidza kuve muenzaniso wakakwana weiyo ane simba BDNF yekuwedzera inowedzera.
Mune zvimwe zviitiko, Semax stack inoshandiswa kusimudzira mushe uye seyakagadziriswa chinodhaka. Imhaka yekuti zvakare inowedzera iyo dopamine uye serotonin zviitiko mumuviri wako, izvo zviri neurotransmitters zvine zvakakosha kukanganisa kunetseka uye kushungurudzika. Kwemakore, vafambi vakaramba vachiwana hutano hwakasiyana hunogona kugadziriswa neSemax.
Semax dosage inoenderana nehutano hwehutano pasi pokurapwa, uye iyo dhigi inofanira kuiswa nachiremba wezvekurapa. Izvo zvinokurudzirwa Semax dosage kubva pa300mcg kusvika ku600mcg. Nekudaro, ivo vashandisi vatsva vanorairwa kuti vatange nemadosi akadzika, ayo anogona kugadziriswa gare gare nachiremba mushure mekutarisa mhinduro yemuviri wako kune uyu mushonga.
Nemishonga, hapana munhu anofanira kuisa njodzi yekutora yakakura dosi yekutanga sezvo inogona kutungamira mukukuvara kwakanyanya. Kuti udzivise chero njodzi inosanganiswa neinodhaka iyi seSemax bvudzi kurasikirwa inogara iri pfungwa yakanaka kuti uende kunoongororwa kuchipatara usati watora mushonga uyu chero chikonzero.
Semax inonyanya kutorwa zvisina tsvina, uye iwe unongofanirwa kutora 2 kana 3 madonhwe madiki mumhino yega yega kana katatu katatu pazuva kutenderera rakatemwa nachiremba wako. Dzimwe mamiriro akadai sekutora Semax yenguva yekudzoreredza mushure mekurapwa, iwe unofanirwa kutora 4 inodonha kumurume mumwe nemumwe, kasatan pazuva. Ye Post narcosis yekuyeuka kana yekutarisira kusagadzikana, iyo inokurudzirwa dosage ndeye 3 inodonha mumhino yega yega katatu pazuva. Semax yekushungurudzika 2 kusvika ku3 inodonha kumhino yega yega, katatu pazuva ndiyo idosi inokurudzirwa.
Chaizvoizvo, the Semax jekiseni piritsi zvinoenderana nemamiriro ehutano ari pasi pekurapwa. Nekudaro, namatira kumirayiridzo yemurapi wechiremba sezvo kurudziro yemugadziri ingasashanda iwe. Vamwe vashandisi vanogona kuwana mhedzisiro yemhando mushure mekutora yakaderera dosages, nepo vamwe vachazofanira kutora yakakwira madosi kuti vawane yaunoda migumisiro. Icho chiitiko chakajairika sezvo masimba emuviri wemunhu akasiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe.
a) Semax In sindion
Semax inogonawo kupihwa kuburikidza nejekiseni, iyo inogona kunge iri yakanakisa dosage yevashandisi vasina kugadzikana nemhino yemhino. Dzese Semax Nasal spray uye subcutaneous jekiseni mafomu anoshandiswa zvinangwa zvakafanana chete izvo zvinosiyana mukushandiswa kwavo.
Chiremba wako anogona kukukumbira kuti usarudze fomu yemhando pakati pezviri. Kazhinji, jekiseni mapiritsi akasimba achienzaniswa nechero imwe Semax fomu. Saka hauzofaniri kutora majekiseni kazhinji semadonhwe emhino ayo aunofanira kutora kaviri kana katatu pazuva kana kutopfuura.
b) Semax jekiseni jekiseni
Zvakanyanya kudaro Semax jekiseni inopa imwe yakanakisa mhino yemhino, gara uine chokwadi chekuti unowana majekiseni kubva kuna chiremba wako. Mamiriro akasiyana anoshevedza mutero wakasiyana. Kuongororwa kwekurapa kuchaperekedza zvakare mushonga wako pakuisa iyo dosi yakanaka kwauri. Semax dosage inofanirwa kunge iri pakati pe300mcg kusvika 600mcg.
Iyo dosage inogona kuderedzwa inoenderera mberi zvichienderana nekuti muviri wako unopindura sei yekutanga Semax jekiseni dosageor kunyangwe yakagadziriswa kumusoro. Kana iwe usina chokwadi nezvekuzvibaya pachako, unogona kukumbira chiremba wako kuti akudzidzise kana kuronga kushanya kunozotora kutora yako dosi. Usazvipinze jekiseni pachako kana iwe usiri kuziva maitiro ekuzviita sezvo zvichizotungamira kune mamwe matambudziko ekurapa.
Semax hachisi chinodhaka chakakurumbira muUnited States of America nekuti FDA haina kubvumidza kubva pakagadzirwa. Nekudaro, pakave nekutsvaga kwakawanda nemiedzo yakaitwa muRussia inoratidza iyo Semax kunyatsoita.
Mushonga wacho wakaratidza mune dzakasiyana-siyana zviedzo zvekurapa pane vanhu, uye zvingave zvese zviedzwa zvinoti hapana chakakomba Semax mhedzisiro. Izvo zvinoita kuti Semax ive yeimwe isina kuchengetedzeka nootropic pamusika nhasi. MuRussia, Semax yakabatsira pakurapa kweakasiyana mamiriro ekurapa akadai se migraine musoro, kurohwa, uye kusagadzikana kwekuziva.
Chinhu chinonyanya kushamisa cheiyi mushonga ndechekuti ine yakakwira potency, asi kunyangwe ikatorwa muhombe dosi, inogona kunge isingave inokuvadza mumuviri wako. Nekudaro, Semax haisati yashandiswa nevanhu vazhinji vari kunze kweRussia kusvika nguva pfupi yapfuura apo Ukraine yakabvumidza kushandiswa kwayo. Danho rako rekutsungirira kwemuviri rinogonawo kusarudza, iyo Semax mhedzisiro yauchawana mushure mekutora mushonga.
Dzimwe diki Semax mhedzisiro dzakataurwa nevamwe vashandisi veSemax senge muromo wakaoma, kuwedzera kutsvaira, kusvotwa, uye kukotsira. Semax uye kudonha bvudzi iriwo imwe yakajairika mhedzisiro mhedzisiro inonzi nevamwe veSemax vanoshandisa. Aya mhedzisiro yese haawanzo kutaurwa, asi vafundisi vanogona kuvadzora. Miviri yavanhu yakasiyana, uye kana iwe ukasangana nezvimwe zvakakomba Semax mhedzisiro zivisa chiremba wako nekukurumidza kubatsirwa.
Kazhinji, Semax inopa mhedzisiro yemhando yepamusoro kana ichishandiswa yega kurapwa kwemamiriro akasiyana ehutano. Nekudaro, kungofanana neanotropics mazhinji, iwe unogona kuwana iyo Semax yakanyanya kubudirira kana iwe uchiitora mune stack. Kratom, ino zvakare imwe inozivikanwa nootropic pamusika inoshandiswa sedative uye inosimudzira, inoita yakanakisa stacking neSemax. Zvakawanda seSemax inogona kuzorora uye kusimbisa mushandisi, kuitora neKratat kunosimbisa miganho yaunoda.
Zvinokurudzirwa kufunga nezvekumaka Semax nePhenylpiracetam nekuda kwesimba kupwanya iro rinogona kukonzerwa nekutora uyu mushonga unomutsa. Phenylpiracetam yakanaka yekuziva-inowedzera-nootropic asi inoita zvishoma nezvishoma. Kune rimwe divi, vashandisi vazhinji vakashuma kuwana kukosha kweSemax pavanouisanganisa nezvimwe zvinokurudzira zvakaita se curcumin iyo inobvumira kuyerera kwenguva refu kwesimba mumuviri.
Kune vashandisi veSemax vane ruzivo rwakawedzera kunetseka vanofanirwa kufunga nezvekusanganisa mushonga neAshwagandha, inoshanda senge inozorodza. Ashwagandha is potent Nootropic iyo inogona kubatsira mukudzora pasi iyo Semax inogona kunetseka spikes.
Zvese mune zvese, Semax inogona kuve yakarongedzwa neakasiyana ma nootropics kukurisa mhedzisiro inotarisirwa. Nekudaro, kana iwe usina chokwadi nezve iyo nootropic yekubatanidza neSemax, gara uchibvunzana nachiremba wako. Kuzvara kwakashata kune njodzi zvakanyanya kune hutano hwako sezvo kunogona kutungamira kumhedzisiro yakaipa.
Semax uye Selank ese ese nootropics akagadziriswa muRussia, uye dzimwe nguva anoshandiswa kubata akafanana ehutano hutano akadai sekugadziriswa kwekugadzikana uye kunetseka. Pamhedzisiro yakakura, iyo miviri mishonga inogona zvakare kushandiswa pamwe. Selank ndeye anxiolytic peptide iyo inoderedza zvakakomba mhedzisiro yekunetseka uye inozivikanwa nekusakonzera chero chakakomba mhedzisiro senge Semax.
Yakagadzirwa, Selank inotorwa kubva ku endo native tetrapeptide Tuftsin, inoita basa rakakosha mu immune system yako. Kuwedzera Selank mhedzisiro uye kuderedza kuputika kwepeptide, vagadziri vacho vanosanganisira Glyproline muchimiro chayo.
Chimiro cheSelank chiito muuropi zvakare chakasarudzika; inoshanda senge anti-kuzvidya moyo mushonga une anti-asthenic uye antidepressant supplement iyo inowedzera ekuziva uye ndangariro zviitiko. Naizvozvo, Semax vs Selank inogona kupokana, asi mishonga yese iri miviri yakanaka yekuziva inowedzera. Selank inotumirwa intranasally, uye iyo dosi inogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ari pasi pekurapa.
Iyo mishonga miviri inosiyana zvakanyanya munzira yavanoshandiswa kurapa matambudziko akasiyana ehutano. Semax inonyanya kugona mukuvandudza kuziva uye kushungurudzika, nepo Selank ichiburitsa mhedzisiro yemhando kana ichishandiswa seyakaipikisa-kuzvidya moyo. Nekudaro, iwo maviri madhiragi anowedzera BDNF mazinga, uye dzimwe nguva anogona kubatanidzwa pamwe, sezvambotaurwa. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Semax vs Selank bvunza nyanzvi yezvekurapa.
Kana iwe uri muRussia, Semax inotengeswa pasi pekunyorerwa kwechiremba. Nekudaro, muUnited States of America, mushonga wacho hauna kunyatsogadziriswa, kunyange hazvo FDA yanga isingatenderi. Izvi zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuishandisa kuburikidza neinootropic online zvitoro. Isu tinogara tichiraira vashandisi veSemax kuti vangwarire uye vatore nguva yavo kuti vawane mutengesi weSemax. Tsvaga kwako, tarisa vatengi ongororo kuti vanzwisise mashandisiro anoita Semax mutevedzeri usati waita yako odhi. Rangarira, haazi ese Semax mutengesi aunowana pamusika anogona kuvimbwa nawo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti isu tiri vanotungamira Semax vanopa mudunhu. Iwe unogona kugadzira yako yekutevera pane webhusaiti yedu uye uve nechokwadi chekugamuchira chigadzirwa chako mukati menguva pfupi pfupi inogoneka. Semax yekutengesa uye Semax stack zvese zviripo pane yedu yekushandisa-inoshamwaridzana online chitoro.
Isu tine hanya Semax poda mutengesi, uye nekudaro, isu tinonyevera vatengi vedu vese vekuremekedza kubva mukutora zvinodhaka zvedu pasina kuongororwa nachiremba kana kubatanidza nyanzvi yezveutano muchirongwa cheyese. Zvakare, zivisa chiremba wako pakarepo iwe unonzwa chero yakaipa mhedzisiro.
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). Semax inodzivirira kufa kwe tyrosine hydroxylase-positive neurons mune yakasanganiswa neuroglial cell tsika inotorwa kubva embryonic rat mesencephalon mumuenzaniso we6-hydroxydopamine-indedu neurotoxicity. Neurochemical Journal, 9(4), 295-298.
Koroleva, SV, & Myasoedov, NF (2018). Semax seye Universal Dhigi Yeti Therapy uye Tsvagiridzo. Biology Bulletin, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, & Miasoedov, NF (2010). Nootropic uye analgesic mhedzisiro yeSemax inotevera nzira dzakasiyana dzehutongi. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, Chivabvu). Semax inogadzirisa kusagadzikana kwehuropi kunokonzerwa nekuiswa kweprenatal yealproic acid. In Doklady Biological Sayenzi (Vol. 450, No. 1, peji 126). Springer Science & Bhizinesi Media.
Triptorelin Acetate Injection / Powder: Ndekupi kwandingaiwana?
Peptide Degarelix poda: Chidhakwa Chaiyo Chinoshandiswa Kune Prostate Kenza
Shangke Chikemikari inyanzvi yepamusoro-soro inonyanya kuzivikanwa mumishonga inoshandiswa yemishonga (APIs). Kudzora hutano panguva yekugadzirwa, nhamba huru yevashandi vane ruzivo, chikwata chekutanga chekugadzira uye ma laboratori ndiyo nheyo dzinokosha.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.aasraw.com www.anonyij.com
© Shangke Chemical 2019 | Created with www.phcoker.com